Myanmar Asian Barometer Survey - 台大胡佛東亞民主研究中心 Asian Barometer
☄ Welcome to the Myanmar Asia Barometer Survey (ABS) Page.
┄ ▵ ┄ ▵ ┄ ▵ ┄ ▵ ┄ ▵ ┄ ▵ ┄ ▵ ┄ ▵ ┄ ▵ ┄
We have conducted two surveys in Myanmar, in 2015 as part of the Fourth Wave, and in 2019, in our most recent Fifth Wave. The surveys are nationally representative samples covering the fourteen administrative divisions of Myanmar (excluding areas of conflict).
The Myanmar ABS 2019 survey was carried out by the Yangon School of Political Science from September to the end of October in conjunction with academics who are part of our collaborative team.
Our team has completedareport on the 2019 Survey, which was released in May 2020, entitled Myanmar Grappling with Transition: 2019 Asia Barometer Survey Report.
➤Please find the links below to the report, the technical report/appendix, in English and Burmese below.
✍ Myanmar Grappling with Transition: 2019 Asian Barometer Survey Report (English) (Burmese)
✍ Myanmar 2019 Technical Report (English) (Burmese) (OLS Statistical Appendix)
➤ The link to the 2015 report can be found here
မြန်မာ အာရှဘာရိုမီတာ စစ်တမ်း (ABS) စာမျက်နှာမှ ကြိုဆိုပါသည်
ကျွန်ုပ်တို့အ‌နေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံတွင် အ‌ကြော့(၄) ကို ၂၀၁၅ခုနှစ်နှင့် မကြား‌သေခင်က အ‌ကြော့(၅) ကို ၂၀၁၉ခုနှစ် တို့မှာ စစ်တမ်း‌ကောက်ယူခဲ့ပါသည်။ စစ်တမ်းများသည် မြန်မာနိုင်ငံရှိ အုပ်ချုပ်မှု ဒေသ ၁၄ခုကို လွှမ်းခြုံပြီး( ပဋိပက္ခဖြစ်သည့် နယ်‌မြေများကို ဖယ်ထုတ်ထား)၊ နိုင်ငံ ကိုယ်စားပြု စံနမူနာ‌ကောက်ယူခြင်း များဖြစ်ကြပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့ အဖွဲ့၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်သည့် ပညာရှင်များနှင့် တွဲဖက်ပြီး မြန်မာ ABS ၂၀၁၉ စစ်တမ်း‌ကောက်ယူခြင်းကို စက်တင်ဘာလ မှ အောက်တိုဘာ လကုန်အထိ ရန်ကုန်နိုင်ငံ‌ရေး သိပ္ပံ‌ကျောင်းမှ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့ အဖွဲ့သည် မြန်မာ ။အသွင်ကူး‌ပြောင်းမှုဖြင့် ရုန်းကန်ခြင်း၊ ၂၀၁၉ခုနှစ် အာရှဘာရိုမီတာ စစ်တမ်း အစီရင်ခံစာ ဟု ခေါင်းစဉ်တပ်ထားသည့် ၂၀၁၉ခုနှစ် စစ်တမ်းအစီရင်ခံစာကို ပြုစု‌ရေးသားခဲ့ပြီး၊ ၂၀၂ဝ ခုနှစ် မေလတွင် ထုတ်‌ဝေ ခဲ့ပါသည်။
မြန်မာ ဘာသာ နှင့် အင်္ဂလိပ် ဘာသာ တို့ဖြင့် ရေးသားထားသည့် အစီရင်ခံစာ၊ ပညာရပ်နည်းစနစ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အစီရင်ခံစာ/ နောက်ဆက်တွဲ များကို အောက်ပါ လင့်ခ် များတွင် ရယူနိုင်ပါသည်။
မြန်မာ ။အသွင်ကူး‌ပြောင်းမှုဖြင့် ရုန်းကန်ခြင်း၊ ၂၀၁၉ခုနှစ် အာရှဘာရိုမီတာ စစ်တမ်း အစီရင်ခံစာ (မြန်မာ)
၂၀၁၉ခုနှစ် မြန်မာ ပညာရပ်နည်းစနစ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အစီရင်ခံစာ (မြန်မာ)
အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် ရေးသားထားသည့် ၂၀၁၅ခုနှစ် အစီရင်ခံစာ လင့်ခ် ကို ဤ နေရာတွင် ရယူနိုင်ပါသည်။
✎𓆙 Feb 6th 2021《The Economist》cited our ABS Myanmar report
Myanmar’s coup turns the clock backadecade
New leader; old problems
➤ Briefing Link Here
Feb 6th 2021 SINGAPORE AND YANGON
Myawaddy,atelevision station owned by the Burmese army, is normally so bad as to be unwatchable. But when the residents of Naypyidaw, Myanmar’s capital, and Yangon, its largest city, woke on February 1st to find soldiers in the streets and martial music blaring from their radios Myawaddy became “must-see tv”. It wasaMyawaddy newsreader who announced that the country was inastate of emergency and under the control of Min Aung Hlaing, the head of the army.
Soldiers were stationed in government offices. Airports were closed and, in the cities, the internet shut down. Hundreds of politicians from the National League for Democracy (NLD), which won an overwhelming victory in the country’s parliamentary elections last November, were put under house arrest. The armed forces also rounded up chief ministers from all the country’s 14 states in addition to democracy activists, writers, three monks andafilm-maker, Min Htin Ko Ko Gyi. Aung San Suu Kyi, who becameafigure of global renown when she led the NLD from house arrest during the 1990s and 2000s, and who as “state counsellor” was the country’s undisputed civilian leader, now finds herself under lock and key again.....